झाेले मिडियाले राष्ट्रपतिलाई जबरजस्ती विवादमा तान्न खाेजेपछि (विज्ञप्तिसहित)
July 16, 2021 N88LeaveaComment on झाेले मिडियाले राष्ट्रपतिलाई जबरजस्ती विवादमा तान्न खाेजेपछि (विज्ञप्तिसहित)
काठमाडौं । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा शपथ लिएका नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको शपथ ग्रहण सर्वोच्च अदालतबाटै गर्न पत्राचार गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सपथ ग्रहणका लागि २०७८ वैशाख ५ गते सर्वाेच्च अदालतबाटै गर्न पत्राचार गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जानकारी दिएको हो । जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोभिड १९ महामारीलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रपतिको […]
सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, मुख्यसचिवको तलब ६७ हजार १३६
July 16, 2021 N88LeaveaComment on सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, मुख्यसचिवको तलब ६७ हजार १३६
काठमाडौँ । आजबाट नयाँ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ शुरू भएकाे छ । याे सँगै सरकारी कर्मचारीकाे तलब दामासायी २ हजारका दरले बढेकाे छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले बजेट भाषणमा २०७८ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी सरकारी कर्मचारीको तलब मासिक २ हजार रुपैयाँले वृद्धि गरेको बताएका थिए । ओली सरकारले ल्याएको बजेट शुक्रबारबाट पूर्ण रुपमा लागू […]
माधव नेपालको राजनीतिक चक्रव्यूह, अव नेपालको बाटो एमाले कि नयाँ कम्युनिष्ट पार्टी?
July 16, 2021 N88LeaveaComment on माधव नेपालको राजनीतिक चक्रव्यूह, अव नेपालको बाटो एमाले कि नयाँ कम्युनिष्ट पार्टी?
काठमाडाैँ। नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सत्तारुढ गठबन्धनले बालुवाटारमा बोलाएको बैठकमा बिहिबार साँझ सहभागी भएनन् । यसले अव नेपालको भूमिका के हुन्छ भन्ने चासो सवैमा रहेको छ । नेकपा एमालेको विवाद समाधान कार्यदलले पार्टी एकताको आधार तयार पार्दै १० बुँदे सहमति गरेको थियो । करिब ४ महिनाअघि अर्थात २४ फागुन साँझ पनि नेपालले […]
July 16, 2021 N88LeaveaComment on बढ्याे सार्वजनिक यातायातको भाडा, कहाँ कति पुग्यो (सूचीसहित)
काठमाडौँ । सरकारले लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातको भाडादर बढाएको छ । सरकारले २० देखि २८ प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको हो । शुक्रबार यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ भाडादरको सूची सार्वजनिक गरेको छ । सूचीअनुसार काठमाडौँ–अत्तरीया–मार्तडी रुटमा सबैभन्दा धेरै ५७६ रुपैयाँ भाडा बढेको छ । कर्णाली करिडोरको निर्माण सम्पन्न सुर्खेत । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कर्णाली करिडोरको निर्माण सम्पन्न […]
इटाभट्टामा जिउँदै मान्छे जलाउने आलमलाई छुटाउन गृहमन्त्रीले दिए ठाडाे निर्देशन
July 16, 2021 N88LeaveaComment on इटाभट्टामा जिउँदै मान्छे जलाउने आलमलाई छुटाउन गृहमन्त्रीले दिए ठाडाे निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कार्यभार सम्हालेलगत्तै अभियुक्त छाडने अभियानलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको तथ्य बाहिर आएको छ । देउवा सरकारका गृहमन्त्री बालकृण्ण खाँणले रौतहतको इटाभट्टामा जिउँदै मान्छे जलाएको अभियोगमा जेल सजाय कटाइरहनुभएका कांग्रेस नेतालाई कारागार व्यवस्थापन बिभागकै महानिर्देशकलाई भेटन पठाएपछि देउवा सरकारको ध्यान अभियुक्त छाडनेतिर केन्द्रित रहेको तथ्य बाहिर आएको हो । स्रोतका अनुसार गेहमन्त्री खाँणको […]
July 16, 2021 N88LeaveaComment on प्रधानमन्त्री देउवासहित कांग्रेसको तीनै समुहले तय गर्यो मन्त्रीको सूची, यी हुन अबका आठ मन्त्री
काठमाडौं। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले मन्त्रीहरुको नाम टुंगो लगाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित ११ मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा पर्ने आँकलनसहित तीनओटै समुहले आफ्नो तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम टुंगो लगाएको हो । नेपाली कांग्रेसका एक नेताले जनताटाइम्सलाई दिएको जानकारीअनुसार देउवा नेतृत्वको सरकारमा संस्थापनबाट ६ जना, बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समुहबाट […]
सर्वाेच्चले सेखी झारिदिएपछि ओली अब कहिल्लै उत्तेजनामा नआउने, बालकोटको कौसीबाट नफलाक्ने !
July 16, 2021 N88LeaveaComment on सर्वाेच्चले सेखी झारिदिएपछि ओली अब कहिल्लै उत्तेजनामा नआउने, बालकोटको कौसीबाट नफलाक्ने !
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरू आवेग र उत्तेजनामा नआउने बताउनुभएको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकको अध्यक्षता गर्दै अध्यक्ष ओलीले अदालतको परमादेशबाट नयाँ सरकार गठन भएकाले आफूहरू सक्रिय एवं रचनात्मक प्रतिपक्षमा रहने बताउनुभयो । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, राष्ट्रिय छवि निर्माण, विकास निर्माण र समृद्धिका लागि पार्टी […]
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाभियोग लगाउने निश्चित !
July 16, 2021 N88LeaveaComment on राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाभियोग लगाउने निश्चित !
काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई शपथ खुवाउने बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग लफडा परेको घटना सेलाउन नपाउँदै अर्काे निहुँ खोजिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको सिफारिसमा बिहीवार नियुक्त गरिएका महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको शपथ शितलनिवासमा गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले निषेध गरेकी छन् । राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गरिने महान्यायाधिवक्ताको शपथ राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीशले राष्ट्रपति कार्यालयमा गर्ने प्रचलन रहेको छ । […]
उल्टियो राजनीति, देउवा ३० दिनमात्रै प्रधानमन्त्री !
July 16, 2021 N88LeaveaComment on उल्टियो राजनीति, देउवा ३० दिनमात्रै प्रधानमन्त्री !
असार २८ को फैसलाबमोजिम केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई प्रतिस्थापन गर्दै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ । यो सरकारले संविधानतः ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु आवश्यक छ । तर,देउवा नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा पुनः निर्वाचनमा जान सकिने अवस्था एमालेले यसबीच बहुमत सिध्द गर्नसक्यो भने टर्ने सम्भावनावारे पनि चर्चा हुन […]
July 16, 2021 N88LeaveaComment on अर्काकी श्रीमती विवाह गर्न गद्दी त्याग्ने राजा